7 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ स्नातक र स्नातक यात्रा | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7युरोपमा सर्वश्रेष्ठ स्नातक र स्नातक यात्रा
स्नातक वा स्नातक पार्टीको योजना पक्कै पनि उत्तम मानिस वा सम्मानको दासी हुनुको सर्वश्रेष्ठ अंश हो. युरोप मा एक दुष्ट साहसिक को लागी सबै गिरोह सँगै हुनु भन्दा बढि रमाईलो के हुन सक्छ? विशेष गरी समूहमा भाग्यमानीहरू बसोबास गर्नु भन्दा पहिले.
युरोप पार्टी getaways को लागी एक महान गन्तव्य हो. हामीले हातले उठाएका छौं7युरोप मा सबै भन्दा राम्रो स्नातक र स्नातक यात्रा को. रातभरको पार्टी र बार होपिंगका लागि शानदार स्पा-थीमाधारित यात्राहरू. त्यसैले, तपाईं दुलही र दुलहा-हुन को लागि सबै भन्दा दिमाग उडाउने यात्रा सिर्जना गर्न बाध्य छन्.
1. बर्लिनमा हिडोनस्टिक बजेट-मैत्री स्नातक / स्नातक
एक उत्कृष्ट बार दृश्यको साथ, बर्लिन एक रमाईलो र उत्साहजनक स्नातक र यूरोप मा स्नातक यात्राको लागि एक गन्तव्य गन्तव्य हो.
बर्लिन यसको पागल पार्टी र Oktoberfest को लागी परिचित छ रaको लागी उत्तम छ सप्तान्तमा जानु. तपाईं प्रसिद्ध ईस्ट साइड ग्यालरीमा गिरोहको केही राम्रा फोटोहरू लिएर पार्टी सुरु गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसपछि, एक निजीकृत बार मा यात्रा जारी वा साहसी र जानुहोस् बार हपिंग. यसबाहेक, बर्लिन केही महान स्पाको घर छ, जहाँ तपाईं क्लबि ofको रात पछि सबै ह्याover्गओभर बाहिर पसीना गर्न सक्नुहुन्छ.
2. एम्स्टर्डमको लागि स्नातक / स्नातक यात्रा
कुख्यात र लोभ्याउने, एम्स्टर्डम यूरोप दुबै पाप शहर र एक सानो स्वर्ग हो. यदि तपाइँ यूरोपको लागि वसन्त स्नातक यात्राको योजना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए एम्स्टर्डम सबैभन्दा मनमोहक हो. फूलहरू नहरहरू, रंगीन घरहरू र प्यारा क्याफेहरू, साइकल यात्रा, र पक्कै पनि मेमा फूल उत्सव. यी सबै चमत्कारहरूले दुलही-बाट-सातौं स्वर्गमा महसुस गराउनेछ.
तथापि, यदि तपाईं पागल सप्ताहन्तमा स्वतन्त्रताको अन्तिम क्षणहरू मनाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, त्यसो भए एम्स्टर्डम वन्य स्नातक पार्टीको लागि उपयुक्त छ. रातो बत्ती जिल्लाको लागि म्यूज डु सेक्सीमा शुरू गर्नुहोस्, र एक पेय र स्ट्रिपटेज डिनरको साथ समाप्त गर्नुहोस्. यसरी, एम्स्टर्डममा स्नातकको यात्रा निस्सन्देह एक अविस्मरणीय यात्रा हुनेछ.
3. प्राग गर्न स्नातक / स्नातक यात्रा
महिलाहरू निश्चित रूपमा प्रागको सुन्दर शहर दृश्यहरूको प्रशंसा गर्नेछन्, वास्तुकला, र कला. साथै, प्राग यसको शीर्ष-खाच बियर बगैचा र ककटेल बारहरूको लागि परिचित छ. यसको मतलब यो छ कि प्रागको बारहरू उत्तम स्थानहरूमा छन् र युरोपमा सबै भन्दा स्वादिष्ट र धूर्त पेयहरू प्रदान गर्दछ, उदाहरणका लागि, हेमिंग्वे ककटेल बार. केही पेय पछि यदि तपाईं वास्तवमै जंगली रात चाहनुहुन्छ भने, प्राग विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात पत्ता लगाउन को लागी रात्रि जीवन दृश्य. त्यो बिहानको ह्या hang्गओभरलाई निको पार्न, प्राग मा सबै भन्दा राम्रो कफी ठाउँ जाँच गर्नुहोस्, मग क्याफे. आफ्नो विशेषता धनी कफी पेय र छ स्वादिष्ट भोजन.
तथापि, यदि तपाईं बुजको रातमा आफ्नो दिमाग हराउन चाहनुहुन्न भने, त्यसपछि शहरको केन्द्रको बाहिर जानुहोस्. प्राग धेरै थर्मलहरू र स्पाको घर हो जहाँ तपाईं एक यात्रा पछि लामा आफैलाई लिन सक्नुहुन्छ जादूगर महल. यसले पक्कै पनि दुलही-देखि-भित्र राजकुमारी जस्तै महसुस गर्दछ एक परी कथा. अर्को महान कुरा पुरुषहरूले पूरै प्रेम गर्दछ नदी राफ्टिंगमा जाँदै छ.
4. बुडापेस्टको लागि यात्रा
आश्चर्यजनक वास्तुकला र डान्यूब नदी पार गर्दै, बुडापेस्टलाई स्नातक यात्रा र स्नातक यात्राको लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउनुहोस्.
डान्यूब नदी तल पेय र पार्टी क्रूज, दर्शनीय वास्तुकलाको दृश्यको साथ शहर पार गर्दै, एक स्नातक र स्नातक पार्टी को लागी आदर्श हो. अर्को उत्तम विकल्प केटीहरूसँग विलासी स्पामा आरामदायक सप्ताहन्त हो. बुडापेस्ट को लागी एक महान शहर हो खाना यात्रा, जहाँ तपाईं एगर र सोमलो बाट राष्ट्रिय वाइन कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ र अन्तिम एकल जीवन मनाउन भोजमा परम्परागत हंगेरी भाँडो स्वाद लिन सक्नुहुन्छ।.
फोस्ट वाइन तहखाना यूरोपमा सबैभन्दा पुरानो तहखानाहरू मध्ये एक हो र तपाई कहाँ सक्नुहुन्छ उत्तम मद्यको आनन्द लिनुहोस् र स्वाद माउथवटरि be्ग गाई र अन्य व्यंजनहरु.
5. Tirol गर्न स्नातक / स्नातक यात्रा
सबैभन्दा साहसी र एड्रेनालाईन-बढावा गर्ने स्नातक युरोपको लागि, अष्ट्रिया मा Tirol क्षेत्र उत्तम गन्तव्य हो. तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि तपाईं मूलमा फर्कंदै हुनुहुन्छ. क्याम्पफायर वरिपरि बसेर, एक बरबेक र पेय पदार्थहरूको लागि तपाईंको काठको केबिन बाहिर. यदि गिरोह एक को लागी छ रक क्लाइम्बिंगको साहसिक, राफ्टिंग, र अधिक धेरै बाहिरी गतिविधिहरू, त्यसपछि क्षेत्र 47, सबै केटाहरूको लागि एक सप्ताहन्त र भव्य पार्टीको लागि एक उत्तम विकल्प हो.
Tirol पनि एक bachelorette यात्रा को लागी उत्तम छ, विशेष गरी यदि तपाईं स्पोरटिभ हुनुहुन्छ र सब भन्दा बढि मध्ये एकमा प्रकृति अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने सुन्दर ठाउँहरू यूरोपमा. भव्य दृश्यहरू र ताजा हावा बन्धनको लागि र तिरोलको जsts्गल र झरनाहरूमा अविस्मरणीय क्षणहरू सिर्जना गर्नका लागि उपयुक्त छन्.
म्यूनिखदेखि इन्सब्रक ट्रेन द्वारा
ट्रेन द्वारा साल्जबर्ग
ट्रेन द्वारा इन्सब्रकमा ओबर्सडोर्फ
ट्रेनबाट इन्सब्रकमा ग्राज
उत्साहजनक दृश्यहरू, पहाड, उपत्यका, र झरना भित्र स्विस आल्प्स युरोप मा काल्पनिक bachelorette यात्रा को लागी एक सही सेटिंग हो. स्विस आल्प्स दुबै साहसी समुहका लागि स्वर्ग र डिस्नेल्याण्ड हो. उदाहरणका लागि, यदि तपाईंको समूह बाहिरी गतिविधिहरू मन पराउछ, त्यसो भए हिउँद छ भने तपाईं स्कीइंग जान सक्नुहुन्छ. वा, अर्कोतर्फ, यदि यो वसन्त वा गर्मी यात्रा हो, त्यसपछि, ट्रेकिंग, वा एक आकर्षक गाउँमा चिलिंग यस अनौठो स्थानमा गर्न केहि चीजहरू मात्र हुन्.
जबकि स्विस आल्प्स को स्नातक र स्नातक यात्रा बर्लिन वा प्राग को एक सप्ताहन्त getaway भन्दा pricier हुन सक्छ, यो पनि हुन सक्छ जहाँ तपाइँ सम्झनाहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ जुन जीवनभर रहन्छ र त्यो अमूल्य हो.
ट्रेनहरु द्वारा Interlaken गर्न Basl
जिनेभा ट्रेनहरु द्वारा Zermatt बाट
ट्रेनहरू द्वारा Zernmat मा Bern
ट्रेनबाट Zermatt गर्न Lucerne
7. स्नातक / स्नातक यात्रा गर्न एक्विटेन, फ्रान्स
एक स्नातक र स्नातक यात्रा एक साहसिक मा जानको लागि एक ठूलो अवसर हो, केहि नयाँ प्रयास गर्नुहोस् र व्यस्त दिनचर्या तोड्नुहोस्. किन यो शैलीमा नगर्नुहोस् र सम्पूर्ण मार्गमा जानुहोस् र प्याम्परिंगमा स्प्लर्ज गर्नुहोस्? Glamping एक दिमाग उड्ने स्नातक र स्नातक यात्रा को लागी एक अद्भुत विकल्प हो. फ्रान्सेली गाउँ एक गजबको छ शिविरको लागि स्थान तपाईंको उत्तम साथीहरूसँग लुक्ने फ्रान्सेली फार्मल्याण्डमा विलासी मंगोलियन स्टाइल यर्टहरू.
बाहिरी पोखरी, फल, खाटमा बिहानको खाजा, क्याम्पफायर, र सुन्दर हिमालहरूको वरिपरि बाइक चलाउनु भनेको फिर्ता-टू-प्रकृति बेफिक्रीको बारेमा हो एउटा स्नातक यात्रा सबैले याद गर्नेछ. स्नातक र स्नातक यात्राहरू सबैको जीवनको सब भन्दा सुन्दर अवधिहरू हुन्. यसरी, यो विश्वको सब भन्दा सुन्दर ठाउँमा मनाउनु पर्दछ र युरोप काल्पनिक वा जंगली स्नातक र स्नातक यात्राको लागि उपयुक्त छ।.
यो युरोपको वरिपरि यात्रा र यात्रा द्वारा ट्रेन गर्न धेरै सजिलो छ एक ट्रेन सेव हाम्रो कुनै पनि गन्तव्य र शहरमा7स्नातक यात्राको लागि उत्तम गन्तव्यहरू.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा Best बेस्ट स्नातक र स्नातक यात्रा" तपाइँको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-bachelor-bachelorette-trips-europe%2F%3Flang%3Dne اور– (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
अविवाहित पुरुष bachelorandbachelorette bachelorette BachelorettetripEurope BachelortripEurope TravelAlps ट्राभल प्याराग यातायात स्विट्जरल्याण्ड TravelTirol